Qiso wax badan kaa yaaban doonta ee ila akhriso | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	8:54 am » Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale 8:25 am » Hawlgalo culus oo maanta ka soconaaya Xaafadaha Ceel Qaloow iyo Buulo Xubeey 8:18 am » WAR DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Baydhabo 8:11 am » Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo weeraraaya Degmada Baraawe 7:17 am » Madaxweyne-yaasha Igad oo sheegay inaysan waxba kama jirin Doorashadii Axmed Madoobe 7:57 pm » Culumada Ahlu Sunna oo taageeray howlgalada lagu baarayo guryaha ku yaala xaafadaha Muqdisho 7:55 pm » Askari ka tirsan Puntland iyo Nabadoon xalay lagu kala dilay Boosaaso iyo Galkacyo 7:54 pm » Prof. Jawaari oo sheegay in baarlamaanka la horkeenayo barnaamijka Maamul u sameynta gobolada dalka 11:28 am » Go`aanka kama danbaysta ah oo Juboland oo Adis Ababa Looga fadhiyo 11:14 am » Qaybo ka mid ah lacagii dowlada loogu yaboohay shirkii 7 May aya gacanta Dowlada Soo galay By: Mastar // Jul 13 2012 at 12:31 pm // 6,525 Reads // Wararka Caalamka, Wararka Somalia Qiso wax badan kaa yaaban doonta ee ila akhriso Share Tweet
Sheekadaan Waa Sheeko Aad uyaab Badan runtii waa sheeko waxyaabo badan kulansatay aadna kaaga yaabin doonto, Sidaan Anigaba Sheekadaan ugu yaabay ayaan doonayaa aqristoow inaan adigaa kaaga yaabiyo, isku day inaad si dhameystiran u aqrisato, Waatan Sheekadii Kabogo.
Safiyo Waa gabar wadanka qurbaha soo gashay sanadkii nasoo gudbay waxey iska dhiibtay wadan kamid ah wadamada Yurub gabadhii mudo ayey kujirtay xerada qaxootiga kadib dowlad ayaaa siisay guri aay degto markii aay kasoo baxday xeradii ayey gurigii dowlada ugu talagashay aay degtay.
Muddo gaaban markey gurigii kunooleyd ayey bilowday iney badsato isticmaaalka computer-ka (internet-ka) Gabadhii Waxey computer xaafada yaallay oo aay kusoo dagtay isticmaalkiisa badsataba Waxaa dhacday habeen ayadoo inboxkeeda kujirto iney aragto fariin cusub oo usoo gashay una qorneyd sida tan:-
Waan kusalaamay Magaceygu waa Cabdi Safiyo waxan arkaa haben weliba inaad computer-ka kudaahdid ilaa waqti danbe ad kugaartid, wax saxib ah aad banaanka uraacdo miyaadan haaysan? makuu wanaagsano inaad computer-ka kudaahdid fadhigiisa waana waano kaaga timid dhankeyga.
Intaa kadin habeen weliba Cabdi Wuxuu usoo diraaa email safiyana waa aay siitirtaaa, lakin haben bey safiyo ayadoo tiri rabto waxey aragtay Subject soo jiito dabadeed waxey gudo gashay fariintii kahor inta aysan tirin
waaw maantay aad baad uqurux badantahay dirac aad u bilicsana waad wadataa waana ogahay emailadeyda ma aqrisatid oo waad tirtaa waanadeydiina ma aadan qaadan wana arkaa waano in lagu siiyo majeclid balse caawa wax waano ah kuma siinayo waxaan kuleeyahay caawa waan kujeclahay waxana isoo jiitay quruxdaada waana kufaraxsanahay inaadan wareeg ubixin, lakin waxaan hubaa maalin in aad ijeclaan doonto, kadib aan isguursan doono, oh kahor inta aanan dhameyn fariinteyda waa inaan kuusheegaa waxa aan ugu jeclahay waa markaa dhoola cadeyneysid oo adoo qadka kusheekeysanaa qof war qosol leh kuusheego,
Kadib markee aqrisatay emailkii aad bey unaxday qof aysan weligeed lakulmin, weligeed aay arkin, weligeed aysan lahadlin, dhahayo waan kujeclahay, waxey bilowday iney isla hadasho aay is weydiso suaalo badan, ugu danbeyntii safiyo waxey go’aansatay iney uceliso jawaab digniin u ah sidan u qorneyd.
Qofka aad tahay magaranayo, waxaa kuu roon inaad emailkan aad iisoo direysid aad joojisid hadii kale waan kudacweyn doonaaa.
Kadib markee udirtay emailkaas cabdi uma uusan soo dirin emailo dheeri ah ilaa dhowr habeen, safiyo durbadiiba waxey isdhahday waa cabsayay waa kaa joojiyay emailkii.
Habeeno kadib safiyo Oo computer-ka kucaajistay oo indhaha isku haaysto kusanteesan kursigeeda ayaa mar indhaha kala furtay eegtay computer-ka durba waxey aragta fariin katimid cabdi inbox-keeda waa ay furtay waxey uqorneyd sida tan.
Haye Qalanjo markey indhaha kuu xirnaayeenaad bad uqurxoontahay malaha aniga ayad igu riyooneysay wan kaxumahay inaanan habeenadan wax email ah kusoo dirin waayo waan mashquulsanaa, waan hubaa inaad itabtay aad ixiistay, mid kale aan kudhahee wan kudacweynayaa ayaad igu tiri ogoow aniga kama cabsanyo inaad idacweyso, dacwadaasna majoojin karto jaceylka aan kuu qabo bye Cabdi.
Qalanjo jooji inaad kucayaartid timahaada waana xili danbe orod ee seexo maskaxda daji wad kucaajistay qadkee.
Safiyo waa aay naxday aad bey uyaabtay sida uu Cabdi ku ogaaday waxa aay isla xiligaas sameyneyso waana xilli danbe xattaa wax shanqar ah mamaqasho, Waxey bilowday ineey raadiso qof wal oo meel kasoo eegayo, maba lahan meel laga soo eegayo oo xattaa daaqadaha waa uxiranyihiin xattaa albaabka, safiyo oo yaaban ayaa iskudayday iney qolkeeda jiifka aay tagto aay seexato, kahor inta aaysan damin computer-ka haddane waxey aragtay email kale oo u yimid.
Qalanjo raadintaa iraadineysid waa jaceyl aad ii qaaday cajiib. wan kujeclahay sidoo kale bye Cabdi.
Waa aay isku naxday safiyo markii aay aqrisay fariintii durba waa aay damisay computer-kii waxeyna u carartay qolkeedii jiifka ahaa ayadoo yaaban, habeenkii kadib markey aragto fariin ka imaaneyso Cabdi ma aaysan furi jirin cabsi iyo naxdin aay ka qaaday awgeed, waey sii tirtaba haddane waxey aragtay email Cabdi kayimid subject u ahaa “Waxbo ha Iga Cabsan” waxey durba maskaxdeeda isweeydiisay matirtaa ma aqrisaa balse ugu danbeyntii ayadoo karti iska baareyso ayey furtay emailkii sida tan uqornaaa.
Qalanjo Hacabsan anigana ha iga cabsan maxaa yeelay markii kugu danbeysay aad emailkeyga aqrisatay waad oroday, waan ogahay waxad isweydineysaa siduu ku ogaaday arinkan, balse waxaan kaa dareemaa qalbigeyga oo aan halkeyga kagala socdaa, Ogoow mar weliba aad idareento aad iga fikirto anigana waan kuudhawahay kaama fogi, waxan fadhiyaa dhinacaada, waxan sugayaa habeenka aad bilowdo inaad idareenti sida aan anigaba udareemayo inaad idhinac fadhiso.
Had & Jeer Waan Kujeclahay.
Safiyo durba wuxuu dareenkeeda siiyay inuu Cabdi Jecelyahay, waxey isweeydiineysaa wuxuu kahadlayo madhab baa oo makujecelyahay, balse siduu ku ogaanayaaa wax walbo aan sameynayo, macquul maahan siduuna iijeceylyahay aniga maba arko mana aqaanee, habeenkaas waxey bilowday iney fariimihiisa ugu jawaabta si aay dhabta u ogaato inuu jeceylyahay iyo inkale iyo siduu ku ogaanayo dhaqdhaqaaq weliba aay sameyneyso, ayadoo sidaa ufikireyso haddane email Cabdi ayimid ayaa usoo dhacay sidan uqornaa.
Hi Safiyo sidee dareemeysaa hadan kuugu yeero qalanjo waayo waxad tahay boqoradeyda.
Waxey ugu jawaabtay.
Haa Cabdi majecli in leygu waco magacaas waxaan jeclahay in la igu waco magaceyga gaaban Safiyo waadna igu wici kartaa magaceyga in la iigu wacana aad baan ujecelahay.
Durbadiiiba waxaa jawaab kusoo celiyay Cabdi oo Leh.
Waa runtaa magacaada ayaa qurux badan, lakin mararka aan kudaawanayo oo aan kufarxayo xiriirkaada waxaan jeclahay inaan kugu yeero magacyo qaas ah, haddane iska seexo waa Late time maxaa yeelay beri waxaad doonaneysaa shahaadada iskuulkaaga, waxana kuu rajeynayaa guul macsalaama Cabdi.
Safiyo markale ayeyba sii naxday siduu ku ogaaday cabdi in aad beri doonaneysid aqoonsigaaga durbadiiba fariin ayey kucelisay aay leedahay.
Cabdi sidee ku ogaatay berri inaan aqooonsigeyga doonanayo aniga wax aan kuusheegay majiraan yaa kaaga warramo arimaheyga iisheeg!!!???? Cabdi Jawaab Ayuu Kusoo Celiyaya Isla Waqtigiiba.
Waan ogahay maxaa yeelay dhinacaada ayaanba hadda fadhiyaaaa, “miyaadan iijeedin, miyaadan i arkeyn miyaadan dareemeyn inaan dhinacaaga fadhiyo” Xatta waxaan ogahay inaad maalin 3xaad aad ka qeyb geli rabtid xaflad sanad guuradii 1da luuliyo ee somaliya. Keliyah waxana og inaad kaqeyb geli rabtid Sanad guuradaas waa Axmed oo deris kula ah intana kaaga soo horeeyay mudo baddan.
Safiyo waayaabtay haddane waxey hubtay axmed keliyah inuu arintaasi ogaa asigana uusan qof kale usheegeyn waxey layaabtay siduu ku ogaaday Cabdi, ayadoo dhidideyso ayey carartay qabowga dhacayo safiyo waa aaba dhidideysaa, waagii markuu baryay ayey sitoos ah u abaartay Ahmed oo deris la ahaaa, Markey Axmed utagtay ayey kutiri axmedoww see tahay , Ahmed Fiican ee maxaa sidaan ugu degdegeysaa wax daran miyaa Safiyo Maya ee waxan kuweeydiinayaa magaraneysaa qof ladhahayo Cabdi Axmed ooyaaban Ayaa dhahay Haa waan garanayaaa qof miyaa kaaga sheekeeyay arintiisa, Safiyo ayaa kujawaabtay maya ee wuxuu iisoo diraa email haben weliba haddana inaad ogtahay meesha usocdo waa ogyahay ee yaawaa iisheeg. Ahmed oo afka kala taagayo ayaa dhahay mawaalantahay wiilkaas waa uudhintay 2 sano kahor, safiyo ayaa Durbaba Naxday Waxey Kutidhi sidee kudhacday emailo ayuu iisoo diraaa ayadoo tustay emailadii uu usoo diray, Axmed ayaa dhahay waxaan maleynayaa qof emailkiisa isticmaalo inuu jiro. durba safiyo ayaa iska soo jartay caawa maseexan karo waa inaa shirkada computerada utagnaa eailkaas naloo aan raadinaaa.
Qolo computer-ada kutaqusasay ayaa lakeenay xaafadii habeenkii markii aay baareen emailka aay isticmaasho waxaa laxaqiijiyay emailkaas in looga soo diray isla computer-ka aay isticmaasho safiyo.
Kadib waxaa la ogaaday in uu la isticmaalo isla computer-ka Dadkii markii aay katageen ayey emailkeedii furtay haddane waaba email kale oo kayimid Cabdi, Safiyo oo yaaban Ayaa iney tirto damacday kahor inteysan aqrisan balse ugu danbeynttii waa aay furtay wuxuuna uqornaa sidatan.
waan lasocdaa inaad axmed utagtay uu arimaheyga kuusheegay, hadda aniga waxan daganaan jiray gurigaan aay dowlada kusiisay waxan isticmaali jiray isla computer-kan aad hadda isticmaasho waxaan dhintay 2bo sano kahor sidaa awgeed ayaan hadda kahor kuudhahay kama cabsanayo dacwad, hadda waad ogaatay waxaan ahay welina waan kujeclahay waxaana kumidoobi karnaa keliyah inaad soo dhimato hadda ma anaa kudilo mise waan kusugaa xiligaad soo dhimato.
Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” SUBXAANALLAH aduunka qofwaliba oo ku nool wuxu arkayaa wax aad la yaabto . Maryan Mursal oo si xun uga xishoodsiisay madaxweynaha Somalia: Video qosol badan Qof aadan Wajigeeda Aqoon Maguursan Lahayd? Hadaba Sheekadani ku Cibrad Qaado. Dumar masaeyr galay miyaan dejin karaa qisadaan waxay ku waa qiso maseyr sii Akhri Qiso Xiiso badan Oday Da`ah oo xabad rooti ah oo uu xaday xukun layaab leh kula dhahcay Erayada Xasuusta ku reebada xaaskaada ama lamaantaada Qodoba muhiin ah Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments